Zhejiang Shineway Imboni Limited.
Engagqwali Valve Ball
Valve Steel Ibhola
Ukumelana nensimbi engagqwali sphere uketshezi
Ubuso bokubekwa uphawu kwebhola lensimbi engagqwali bune-valve yesango efanayo, kanti ingaphezulu lesiqu se-valve lineperoxidized, ngakho-ke linokumelana nokugqwala okuhle kakhulu futhi futhi liyamelana nokugqoka. Insimbi yesango lensimbi engakhethi ingakhetha amapayipi ahlukahlukene, ukuze yanelise isidingo sokung ...
Ukuqina okuphezulu nokugqoka ukumelana nebhola lokuqinisa kanzima
Ibhola lokuqinisa kanzima uchungechunge lwebhola lokuvula nokuvala lamavalvu ebhola le-GM, anezinga lokushisa eliphakeme elihlukahlukene, ingcindezi ephezulu kanye namavalvu ebhola lokugqoka. -Cr-W C no-W i-alloying alloy inobunzima obuphansi futhi ingenye yezinto ezinhle kakhulu. Iyamelana nokushaqeka okubandayo nokushisayo, ...
Ukuqinisekisa kanjani ukusebenza kokufakwa uphawu kwe-valve yensimbi engagqwali
Ukuqinisekisa ukusebenza kokufakwa uphawu kwe-valve yensimbi engagqwali lapho ingcindezi yokusebenza ephakathi iphansi, kufanele kwakhiwe ingcindezi ethile yangaphambi kokuqina phakathi kwebhola nesihlalo sokubekwa uphawu. Esihlalweni sokuqina sokuqina, ukuthembeka nokuphila kwensimbi engagqwali ibhola v ...
Liyini ithemba lokuthuthuka lensimbi engagqwali yebhola
Kunezinhlobo eziningi zama-valve wensimbi engagqwali. Izinhlobo ezahlukahlukene zamaphayiphu wensimbi engagqwali anemisebenzi ehlukene nezindlela zokusebenzisa. Kulezi zinsuku, ukuthuthuka kwesintu akunakwehlukaniswa nokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, futhi ngokuhlangene nakho kuqhuba ukuthuthuka okuqhubekayo ...
Amabhola Of Ball Valve